Weraar Ismidaamin ah oo Afgooye kadhacay – Radio Daljir
Maajo 22, 2018 4:06 g 0
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Weerar Ismiidaamin ah uu ka dhacay Degmadaas.
Weerarka ayaa la sheegayaa in lala beegsaday Ciidanka loo yaqaan Bangarafta ee Saldhggooda yahay Balli doogle,waxaana xilliga weerarka ay marayeen Isgooyska Baar Ismaaciil ee Magaalada Afgooye.
Al-shabaab oo mas’uuliyadda weerarkan sheegtay ayaa ku faanay in ay ku dileen 12 Askari kuwo kalen ku dhaawaceen.
Warka soo baxay Al-shabaab ayey ku sheegteen in Nin iyaga ka tirsanaa oo watay Gaari laga buuxiyay walxaha Qarxa uu ku dhuftay Gaari Cabdi Bile ah oo ay saarnaayeen Askarta Dowladda.
Ciidanka la weeraray ayaa ka yimid dhinaca Garoonka Balli doogle,waxaana ay ku soo jeedeen Magaalada Muqdisho,iyada oo ilaa hadda Dowladda Soomaaliya aysan ka hadlin weerarkaas.
Madaxweynaha Jubbaland oo la xisaabtamaya Hay’addaha Samafalka